Somaliland: Dhakhaatiir Ajanabi ah oo Hawlgalo Caafimaad Ka fulinaya Dhulka Miyiga ah | Baligubadlemedia.com
Somaliland: Dhakhaatiir Ajanabi ah oo Hawlgalo Caafimaad Ka fulinaya Dhulka Miyiga ah
February 4, 2019 - Written by admin
Cisbitaalka guud ee Hargeysa ayaa xaflad daahfur ah u sameeyey dhakhaatiir ajanabi ah oo hawlgal caafimaad ka bilaabi doonna miyiga fog ee Somaliland, kuwaas oo sita qalabkii lagu fulin lahaa qaliinadda oo gaadiid waaweyn ku rikiban.
Hay’addan mashruucan qaliinka ka fulinaya dhulka miyiga ah ayaa la yidhaahda Mission to Heal, waxaanay gargaar caafimaad ka soo sameeyey dalal badan oo Afrika ka mid ah, waxaanay markii ugu horeysay ka samaynayaan qaliimo goobaha miyiga ah ee aanay ka jirin cisbitaalo.
“waxay noqotay Somaliland meeshii ugu horeysay ee diyaar u noqota ee soo dhoweysa oo min lawyo cado ila Hargeysa soo soo dhoweeyey”ayey tidhi Dr;Edna Aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta Somaliland.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Caafimaadka Naasir Cumar Jaamac oo isna mashruucan ka hadlayey waxa uu yidhi “ waxaanu cisbitaalka weyn ee Hargeysa ku daah fureyna hawlgal caafimaad oo aad u balaadhan oo ay waddo hay’adda Mission to Heal oo dadka buga loogu gargaarayo, waxaana inala jooga aasaasihii hay’adaasi, waxaanay hay’adani doonaysaa in in dadka xanuunsanaya ee gaadhi kari waayey goobihii caafimaadka inay adeegii caafimaad oo soconaya ay gurigiisa ugu geeyaan bukaanka”.
Sidoo kale, waxa shacabka iyo xukuumaddii soo dhoweeyey hawlgalkan caafimaad ee dadka ugu gargaarayaa masuul u hadlay hay’ada ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin joogi taanka iyo inay shaqo ka bilaabaan Somaliland.